Imigaqo yethu ekhokelayo - uFuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
Imilinganiselo yethu yokuziphatha, indlela esiziphatha ngayo kunye nokuziphatha kwethu
Sisebenzisa iiasethi zethu ezizodwa, u-Huasheng uzibophelele ekuboneleleni ngeemveliso eziphezulu kunye neenkonzo ezonyusa nokwandisa ukusebenza kwabaxumi bethu.
Ukuzibophelela kwethu kubaThengi
U-Huasheng uzibophelele kukugqwesa kuyo yonke into esifuna ukuyenza. Sijonge ukwenza ushishino ngendlela engaguquguqukiyo neselubala nabo bonke abathengi bethu. Abathengi babeka ukuthembela okukhulu kuthi, ngakumbi xa kufikwa ekuphatheni ulwazi olubuthathaka noluyimfihlo. Isidima sethu sokunyaniseka kunye nokusebenzisana ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni nasekugcineni le ntembeko.
Ishishini lethu liqala ngabantu abakhulu
E-Huasheng, sikhetha ukuba siqeshe bani kwaye siqesha abantu abaneentliziyo. Sijolise ekuncedeni omnye komnye aphile ubomi obungcono. Siyakhathala omnye ngomnye, ke ukunyamekela abathengi kuza ngokwendalo.
Ikhowudi yeenqobo ezisesikweni
Ikhowudi ye-Huasheng ye-Ethics kunye ne-Huasheng isebenza kubo bonke abalawuli be-Huasheng, amagosa, kunye nabasebenzi benkampani. Ziyilelwe ukunceda umqeshwa ngamnye ukuba aphathe iimeko zeshishini ngokufanelekileyo nangobulungisa.
U-Huasheng uzibophelele ekuthobeleni imigaqo-nkqubo evakalayo yolawulo lwendibaniselwano kwaye wamkele iindlela zolawulo lweshishini.